LA ISKULAMA SALAAMIN: Kulankii Lega Serie A oo ay ka bexeen lixda kooxood ee ugu waawayn Talyaaniga! – Gool FM
LA ISKULAMA SALAAMIN: Kulankii Lega Serie A oo ay ka bexeen lixda kooxood ee ugu waawayn Talyaaniga!
(Roma) 22 Maarso 2017 – Kooxaha AC Milan, Juventus, Inter, Napoli, Roma iyo Fiorentina ayaa gebi ahaanba iskaga baxay shir ay iskugu yimaadeen kooxaha Talyaaniga iyo Lega Serie A kaasoo looga hadlayay xuquuqda TV-yada ciyaaraha tebiya.
Kulankan ayay wada joogeen 20-ka naadi ee heerka 1-aad si ay u doortaan madaxwayne cusub oo maamula Lega Serie A, balse 6 naadi iyo Chievo ayaa mar horaba iskaga baxay.
“Khilaafka jira lama dawayn karo. Waxaan haysannaa 80% taageerayaasha Talyaaniga, dhibkuna waa xuquuqda TV-yada sidii caadiga ahaydba,” ayuu yiri guddoonka AC Milan ee Adriano Galliani oo warfidiyeenka kula hadlay xarunta Lega isagoo sheegay inaan la’aantood waxba la go’aamin karin maaddaama loo baahan yahay 15 cod.
Ragga la baxay Galliani ayaa kala ah maareeyaha Juventus ee Giuseppe Marotta, Giovanni Gardini oo Inter ah, guddoonka Fiorentina ee Sandro Menucci, Umberto Gandini oo Roma ah iyo dhiggiisa Napoli ee Antonio Saracini.Galliani ayaa si la yaab leh u beeniyay war ay waydiisey ANSA oo ku saabsanaa inuu qayb ka qaadan doono maamulka Milan kaddib marka la iibiyo.
“In la maleeyo inaan sii ahaan doono madaxa Milan waa sida sida iyadoo la yiraahdo Donald Trump waa madaxwaynaha ISIS. Doqon unbaa malayn kara inaan sameeyo wax uusan ogayn Berlusconi.” ayuu yiri.
NIKE vs ADIDAS: Ronaldo vs Messi….(Xiddigaha xayaysiinta u sameysa labada shirkadood oo shax laga sameeyay, Midee adag??)
Barcelona oo qorshaynaysa inay si bilaash ah ku hesho laacib ka tirsan Real Madrid